Aza mifantoka amin'ny tendron'ny SEO Iceberg fotsiny. Martech Zone
Aza mifantoka amin'ny tendron'ny Ice Iceberg fotsiny
Alarobia, Septambra 7, 2011 Alahady Oktobra 30, 2011 Douglas Karr
Iray amin'ireo orinasa SEO taloha dia nanana sarin'ny vongan-dranomandry teo amin'ny pejy fandraisana. Tiako ny fampitoviana amin'ny vongan-dranomandry raha ny momba ny fanatsarana ny motera fikarohana. Ny resadresaka nifanaovanay tamin'ny mpanjifa momba ny fiverenan'izy ireo tamin'ny teti-bidin'ny Search Engine Optimization dia nahitana ahiahy fa tsy nahazo afa-tsy mpitsidika tokana vitsivitsy izy ireo tamin'ny taona lasa ho an'ny fehezan-teny fehezanteny mikendry, mampiroborobo ary manara-maso izahay.
Tena tokana ilay teny lakile ary tsy mahazo alalana hizara azy aho…. fa amin'ny famerenana ny Analytics, izy ireo dia mahazo fitsidihana vitsivitsy fotsiny… noho izany teny lakile marina. Na izany aza, manodidina ny 200 ny fitsidihana isam-bolana ho an'ny fikarohana mifandraika amin'ny teny lakile alohan'ny niasanay tamin'ny fanatsarana. Taorian'ny fandaharana SEO nahomby izay nitondra azy ireo tamin'ny # 1, dia nitombo hatrany amin'ny 1,000 ny fitsidihana isam-bolana. Ny teny lakile dia tsy nahitana fitsidihana vitsivitsy fotsiny taloha sy am-polony taorian'izay. Ny mpanjifa ihany no nandrefy ny fe-potoana marina ary tsy ny fifamoivoizana mifandraika sy mifandraika amin'izany.
Nisy 266 teny lakile mifandraika izay nifamoivoizan'ny mpanjifa talohan'ny programa. Izany dia nitombo hatramin'ny 1,141 fehezanteny teny mifandraika izay nahazoany fifamoivoizana tamin'ny fampiroboroboana sy fanatsarana. Ireo fitadiavana teny fanalahidy mifandraika amin'ny 1,141 dia niafara tamin'ny farany Mpitsidika vaovao 20,000 XNUMX mankamin'ny tranonkala. Rehefa manisa ny fiverenana ianao fa fampiasam-bola, fandresena ihany. Ireo teny ireo dia fantatra amin'ny hoe teny lakile lava rambo, ary indraindray betsaka kokoa ny mpanjifa, ny vola ary ny fahafaha-manao any noho ny miady amin'ny fifaninanana amin'ny teny lakile avo lenta.
Ny fehiny dia ny SEO dia tsy toy ny mividy teny lakile amin'ny PPC. Ny fikarohana biolojika dia manana fotoana hampitomboana ny fivezivezenao amin'ny alàlan'ny tambajotran-teny mifamatotra mifandraika amin'izany. Zava-dehibe io amin'ny paikadin'ny motera fikarohana anao. Raha mifantoka amin'ny tendron'ny iceberg, tsy miraharaha ny habetsahan'ny fifamoivoizana avo kokoa izay mitondra anao ny teny fikarohana mifandraika.
Paikady iray hafa izay olana iray io dia ny fikarohana eo an-toerana. DK New Media vao tsy ela akory izay dia nanao fanaraha-maso SEO tamin'ny orinasa miorina amin'ny serivisy izay miasa nasionaly. Ny fampiroboroboany, ny atiny, ny hierarchy amin'ny tranokalan'izy ireo - ny paikadin'ny SEO iray manontolo - dia ireo teny miorina amin'ny serivisy ankapobeny no kendrena nefa tsy misy jeografia.
Ny mpifaninana mihinana ny sakafo antoandro - mahazo a zato heny ny fifamoivoizana satria nokendren'ireo mpifaninana am-pahendrena ny jeografia ho mahery setra toy ny lohahevitra serivisy. Raha niara-niasa tamin'ny azy ireo ity orinasa ity SEO consultant, ny jeografia aza tsy tonga akory tamin'ny resaka satria tsy misy dikany ny volan'ny fikarohana. Nifantoka tamin'ny tendron'ilay ranomandry ilay matihanina SEO… ary tsy nahatratra ny 90% + tamin'ny fikarohana teny fohy ara-jeografika kely kokoa izy.
Sahirana ny orinasa… manana antony marobe hanandrana hanonitra izy ireo raha manantena ny ho mpitarika amin'ny karoka mifandraika amin'ny serivisy. Ny zava-misy dia ny fikarohana eo an-toerana no fe-potoana voalohany rehefa mitady serivisy isam-paritra. Tsy hitady “fanasana fiara” ao amin'ny Google ianao… fa hikaroka ny manodidina anao na ny tanàna ho fanampin'ny “fanasana fiara”. Mety tsy dia misy fikarohana be momba ny “fanasana fiara Albuquerque”… fa ampio ny tanàna rehetra any Etazonia miaraka amin'ny fanasana fiara ary isa lehibe izany.
Tsy maninona ny mitarika paikady eo amin'ny tendron'ny iceberg, mandrefy, manara-maso azy ary manatsara izany. Na izany aza, aza adino fa ny tendrony ihany no iasanao!
Anatomy an'ny mpankafy Facebook
Mijaly ve ny tranokalanao amin'ny famelabelarana mialoha ny fotoana?